Daabacaadda Buugga 'Hardcover' ee Shiinaha oo leh Soosaaraha Madaxa iyo Taabal iyo Dhagax | Daabacaadda Aqoonta
Buugaagta Caruurta ee Hardcover Buugga daabaca oo leh Gogosha Madaxa iyo Duubka
Magaca badeecada: daabacaadda buugga dhijitaalka ah ee carruurta iyo maro iyo dabadaba
Waxyaabaha: warqad isku duuban iyo / ama warqad offset, boodhka cawlan,
MOQ: 300 nuqul oo ah nidaamka caadada
Shirkadeena waa soo saare daabicis oo ku taal Qingdao, CHINA. Iyada oo leh khibrad wax soo saar leh oo hodan ah oo ka badan 16 sano, waxaan ku deeqi karnaa qiimo wanaagsan iyo tayo iyo MOQ hoose.
Kuwa doonaya inay daabacaan buug, waxaa jira habab kala duwan oo daabicitaan ah. Daabacaadda buug cusub waxay noqon kartaa hawl cabsi leh, waana ay adkaan kartaa in la garto nooca daabacaadda ugu fiican himilooyinkaaga. Si kastaba ha noqotee, fahamka faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka habab kaladuwan ayaa kaa caawin doona inaad kor u qaaddo macaashkaaga.
Mid ka mid ah hab caan ah oo daabacaada loogu sameeyo qoraayaasha cusub waa daabacaad gaagaaban. Hawshani waxay u baahan tahay buugaag aad u yar in la dalbado marka la barbar dhigo habab kale. Daabacaadda noocan ah badiyaa waxaa loo sameeyaa si qumman, halkii laga isticmaali lahaa daabacaad ballaaran.
1) Yaraynta qashinka
Qaabkan wax soo saarka ayaa soo saaraya buugaag aad uga yar marka loo eego qaababka kale, sidaa darteed haddii buugaag ka yar la iibsado intii la filayay, buugaag kayar ayaa la khasaaray. Waxay sidoo kale ka dhigan tahay buugaag ka yar qorayaasha si ay uga baaraandegaan una qaybiyaan.
2) Dufcad yar oo jaban
Kani waa habka kaliya ee qoraagu u soo saari karo buugaag aad u yar. Marka haddii kaliya loo baahan yahay nuqullo kooban, kani waa habka ugu jaban ee lagu heli karo. Haddii aad u baahatid nuqulo intaa ka badan, waxaad si fudud u dalban kartaa dib u daabacaad.
1) Qiimaha qaybta sare
Haddii aad u baahan tahay tiro badan oo buugaag ah, ka dib waa inaad raadsato qaab ka duwan daabacaadda muddada gaaban, sababtoo ah waxay noqon doontaa mid qaali ah. Marka la barbar dhigo daabacaadda 'offset', tirada buugaagta, qiimaha ayaa aad uga badan.
2) Kharashaadka qeybta sare
Hore: Kaydka Buugaagta Qurxinta
Xiga: Daabacaadda Guud ee A4 Magazine Daabacaadda